Ingabe Ukukhathala Kwenu Kusuka Ezingxenyeni Zokusesha Ukukhahla Iwebhusayithi Yakho? - Misa Ngama-Semalt!
Izinjini zokusesha zishintsha ama-algorithms azo cishe nsuku zonke futhi lezi zinguquko azihle zihlale zihle kubaxhumanisi bewebhu nababhulogi. Kukhona njalo ithuba lokuthi iwebhusayithi yakho izovinjelwa ngenxa yezinqubomgomo ezintsha zokusesha injini. Ngaphezulu kwalokho, imiphumela yabo yokusesha ye-geo kanye nokwenza ngokwezifiso kungenzeka kuthinteke. Kuhle ukuvimba amawebhusayithi amaningi kusuka kumiphumela yokusesha ye-Google, Bing, ne-Yahoo ukuze amakhasi akho ewebhu avele kalula. UJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt , uthi ngokubonga, kunezindlela ezithile zokuvimbela amawebhusayithi athile emiphumeleni yokusesha. Ezinye zazo zixoxwe ngezansi.
1. Umlando Wokuvimbela Iwebhusayithi Yewebhusayithi:
Ukudala amabhulogi ewebhu kuwebhusayithi yakho ku-Google Chrome kulula njenge-ABC. Kulokhu, kufanele ufake isandiso se-Google; uma efakiwe, uzobona okukhethwa kukho ukuvimbela amasayithi noma ama-URL anokucasula kaningi futhi asuse isayithi lakho ngemuva kwemiphumela yokusesha ye-Google. Uma uchofoze inketho ye-Block, lawo mawebhusayithi azoshabalala masinyane emiphumeleni yokusesha ye-Google. Kufanele ukhumbule ukuthi lezi zingosi zivela emiphumeleni yokusesha ye-Yahoo ne-Bing, okusho ukuthi awukwazi ukuwavimbela kusuka kwezinye izinjini zokusesha usebenzisa le nqubo.
2. Vimba umeshi wamanje kusuka kuzinjini zokusesha ezifana ne-Google.com:
Kulula ukuvimba umeshi wamanje kusuka ku-Google..i-com. Uma unezilungiselelo ze-Google Chrome's Izilungiselelo zakho zivulekile, ungavimbela amawebusayimu asolisayo noma omdala ngokuchofoza inkinobho ye-BlockIt. Futhi uma uchofoza inketho ye-Show, amawebhusayithi afanayo azophinde avele emiphumeleni yakho yokusesha ye-Google.
Uma ufuna ukubona uhlu lwamasayithi osanda kuvinjelwa, udinga nje ukuchofoza isithonjana sokuvimbela kubha yamathuluzi. Lokhu ngokuvamile kubonakala kumbala we-orange futhi unesithonjana sandla.
3. I-Webspam Report Report plugin:
Ngaphandle kwalezi zindlela ezimbili ezingenhla, i-Webspam Report plugin nayo inhle ukuhamba nayo. Lokhu kukuvumela ukuba ubike amawebhusayithi asolisayo namadoda omdala njengogaxekile. Eqinisweni, kuyindlela elula futhi engcono kakhulu njengoba ungabika amawebhusayithi amaningi namabhulogi ngesikhathi esithile. Uma imibiko yogaxekile ithunyelwa ku-Google, injini yokusesha izogcina igweme futhi ivimbele isayithi kusuka emiphumeleni yayo.
Ngalesi sandiso, ungavimbela yonke imiphumela engadingeki futhi enolisayo kusuka ku-Google search engine. Ngeshwa, le plugin ayisebenzi kahle nge-Safari nakwezinye iziphequluli zewebhu. Kusho ukuthi ungayisebenzisa kuphela uma usakaza amawebusayithi nge-Google Chrome futhi isiphequluli njengendlela eyinhloko.
4. Kubasebenzisi be-Firefox:
Uma ungumsebenzisi we-Firefox, kungenzeka ukufaka izengezo ezifanayo ezizovimba zonke izingosi ezingafuneki emiphumeleni yokusesha. Ngokwesibonelo, uma unesayithi le-WordPress, ungabheka i-plugin esiza ukuvimba amasayithi angafuneki emiphumeleni yokusesha ye-Firefox. Uma usufakiwe ngokugcwele, ungakwazi ukuvula i-plugin futhi uvimbele noma ususe amawebhusayithi namabhulogi ongafuni ukubonisa emiphumeleni yakho yokusesha ye-Google.
Zonke lezi zindlela kulula ukulandela futhi zisebenze kuzo zonke izinhlobo zamawebusayithi, amabhulogu, kanye namakhasi wezokuxhumana.